होमपेज / शुक्रबार / जुम्बामा गृहिणी
जुम्बामा गृहिणी	02 Aug 2013 शुक्रबार १८ श्रावण, २०७०
संगीता श्रेष्ठ	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
आजभोलि धेरै महिलाका लागि फिटनेसको विकल्प बनेको छ, जुम्बा डान्स। वजन घटाउन महिलाहरू रिमिक्स गीतमा कम्मर मर्काउँदै गरेका भेटिन्छन्। कलाकार, नृत्यांगनाहरूसम्म सीमित नाच अब आम महिलाको रुचिको विषय बन्न थालेको छ। शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि एकदमै उपयोगी मानिने जुम्बा डान्सप्रति युवतीहरूको मात्र नभई कामकाजी र गृहिणी महिला पनि आकर्षित हुँदै गएका छन्। ओयस्टर स्पा एन्ड फिटनेस क्लबमा जुम्बा डान्स सिक्न आउने गृहिणीहरूको संख्या बढी रहेको बताउँछन्, क्लबका सञ्चालक अजीत शर्मा। भन्छन्, 'आजभोलिका महिला आफ्नो फिटनेसप्रति धेरै कन्सस भएका छन्। त्यसैले होला, हाम्रो क्लबमा डान्स सिक्न आउनेमा बढी जसो गृहिणी छन्।' एक वर्षअघि आफ्नो मोटोपन देखेर हैरान थिइन्, सवानु रायमाझी। भन्छिन्, 'मेरो वेट ६८ केजी थियो। चिन्तै लाग्थ्यो शरीरको।' व्यायामका रूपमा उनले जुम्बा डान्सलाई रोजिन्। 'एक वर्षमा मेरो १४ केजी वजन घट्यो। जुम्बा गर्दा एकदमै रमाइलो लाग्छ। यसले बडीलाई एक्टिभ बनाउनुका साथै आत्मविश्वास पनि बढाउँछ,' उनी भन्छिन्। वजन घटाएर उनी जस्तै मक्ख छिन्, ३६ वर्षीया रञ्जीता पोखरेल पनि। उनले त सातआठ महिनामै १४ केजी वजन घटाएकी छिन्। भन्छिन्, 'जुम्बा गरेपछि फूर्ति आएजस्तो लाग्छ, फ्रेस भइन्छ। फिजिकल फिटनेसका लागि एकदमै राम्रो हो जुम्बा।'दिनभरि घरमा बस्दाबस्दा वाक्क लागेपछि जुम्बालाई मनोरञ्जनको साधन बनाएका छन् गृहिणीले। सवानु भन्छिन्, 'दिनभरि घरमा बस्दा बोर भइन्थ्यो। जुम्बा गर्न थालेदेखि रमाइलोको साथसाथै टाइमपास पनि हुन्छ।' गृहिणीका लागि जुम्बा डान्स क्लास नयाँ–नयाँ साथी बनाउने थलो पनि भएको छ। साताको तीन पटक क्लास हुन्छ। त्यहीँ नै डान्स गु्रपका महिलाहरू भेटिन्छन्। 'हाम्रो डान्स गु्रपका सबै साथी साह्रै मिल्ने छन्। साथीहरूसँग गफिन पाउँदा निकै मजा लाग्छ,' रञ्जीताले थपिन्।सन् १९९० को दशकमा डान्सर र कोरियोग्राफर अल्बर्टो 'बेटो' पेरेजले प्रारम्भ गरेको कोलम्बियन डान्स जुम्बा काठमाडौँका महिलाका लागि निकै लाभदायक साबित भएको छ। वाई स्ट्यान्ड डान्स स्कुल, बानुज फिट्नेस क्लब, साल्सा डान्स एकेडमी, नेत्रालय, जासमिन फिट्नेस क्लब एन्ड स्पालगायत विभिन्न क्लब तथा डान्स स्कुलले जुम्बा डान्सको अभ्यास गराउँदै आएका छन्। नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गीतहरू रिमिक्स गरी कहिले फास्ट त कहिले स्लो गरेर जुम्बा डान्स सिकाइन्छ। नौ महिनादेखि जुम्बा डान्सको ट्रेनिङ लिइरहेकी सगुन सुब्बा भन्छिन्, 'जुम्बाले लाइफ कलरफुल बनाएको छ। बडी फ्लेक्जिबल भएको छ। यसले फिट्नेसका साथै इन्जोयमेन्ट पनि दिन्छ।' सगुनकै कुरामा सहमति जनाइन्, दीपान्दिता बस्नेतले। 'मेरो वेट ६२ केजी थियो,' उनले भनिन्, 'जिम गरेर मैले आफ्नो वेट ४६ मा पुर्यालएँ। त्यसलाई मेन्टेन त गर्नुपर्योा,' उनी भन्छिन्, 'तर, जिममा मसिनसँगै अल्भि्कनुबाहेक केही हुँदैन, मोनोटनस लाग्थ्यो। त्यसैले मैले जुम्बा ज्वाइन गरेँ।' जुम्बा डान्सले वजन कम गर्न मद्दत गर्ने भएकाले यसलाई धेरै महिलाले मनपराउने बताउँछिन्, जुम्बा इन्स्ट्रक्टर जेनिसा विष्ट। भन्छिन्, 'जुम्बा डान्सका गीतहरू नै शरीरको विभिन्न अंगलाई फोकस गरेर बनेका हुन्छन्। त्यसैले डान्स गर्दा वेट मजाले लुज हुन्छ।' धेरै महिला आफ्नो वजन घटाउनकै लागि जुम्बा सिक्न आउने बताउँछन्, साल्सा डान्स एकेडमीका सिइओ विनायकदास श्रेष्ठ। 'हाम्रो यहाँ जुम्बा सिक्न आउनेमा ९० प्रतिशत गृहिणी हुन्छन्,' उनी भन्छन्, 'उनीहरू आउनुका मुख्य कारण वजन घटाउनु नै हुन्छ।' यसबाहेक स्टेमिना बढाउन आउने पनि हुन्छन्। त्यस्तै, थाइराइडको समस्या भएकालाई डाक्टरले नै जुम्बा गर्ने सल्लाह दिने भएकाले गृहिणीहरू जुम्बा गर्न आउने श्रेष्ठ बताउँछन्। साल्सा डान्स एकेडमीले भाटभटेनी र जावलाखेलमा गरी दुई ठाउँमा जुम्बा डान्स सिकाउँछ। एकेडमीले तीन महिनासम्म भ्यालिड हुने गरी १० घण्टाको 'पन्चकार्ड' दिन्छ। श्रेष्ठका अनुसार असार महिनामा जुम्बा डान्स सिक्नेहरूको संख्या भाटभटेनीमा लगभग दुई सय र जावलाखेलमा तीन सय थियो। यस्तै एक वर्षदेखि जुम्बा डान्स सिकाउँदै आएको नाट्यालयमा पनि जुम्बा सिक्नेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको बताउँछन्, त्यहाँका कर्मचारी विजय चिलवाल। 'हामी साताको पाँच दिन क्लास लिन्छौँ,' उनी भन्छन्, 'बिहान दुई वटा क्लास सञ्चालित गछर्ौं भने बेलुका एक। जुम्बा सिक्नेमा गृहिणीको संख्या बढी छ।' डान्स गरेर रमाइलो हुने र वजन पनि घट्ने भएकाले गृहिणीहरू यसतर्फ बढी आकर्षित भएका चिलवाल बताउँछन्। भन्छन्, 'केटाकेटीले मात्रै डान्स सिक्ने हो भन्ने धारणा परिवर्तित हुँदै छ। महिलामा हामीले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भइरहेको छ।' Tweet Leaveacomment Message *
'दुःख छ, दुःखै गाइन्छ'आइतवार दिउँसो काठमाडौँ, सुन्धाराको आकाशेपुलछेउ 'राम्रो फूल त फुल्नै नहुनी' बोलको गीत गुञ्जिरहेको थियो। मान्छेहरू घेरा हालेर गायन टोलीलाई निहार्दै थिए। त्यत्तिकैमा एउटी महिला बोलिन्, 'ओहो ! यस्तो स्वर त...	'मिस्ड कल'माथि गीत'मिस्ड कल' गरेर दुःख दिनुभन्दा 'कल' नै गर्नु जाती ठान्छिन्, अभिनेत्री सुष्मा कार्की। गायत्री थापाको 'लोक पप' गीत 'फोन गर मायालु मिस कल नगर'को म्युजिक भिडियोमा नाच्दै गर्दा उनले यस्तो...	बदमासीका ती दिनएउटा उचाइमा पुगेपछि आफ्नो विगतलाई बडो सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गर्नु मानवीय स्वभाव हो। हास्य अभिनेताका रूपमा चर्चित दीपकराज गिरीलाई भने आफ्ना विगतका तीतो र मीठा दुवै सत्य प्यारा छन्। आफ्ना...	'हँसाउनुमात्रै हाम्रो लक्ष्य होइन'प्रसिद्ध कला जोडी 'मह'का मदनकृष्ण श्रेष्ठ अहिले देशमा आइरहेको हास्य सिरियलहरूको बाढीप्रति सकारात्मक छन्। तर, उनको मान्यता छ– 'कमेडियन'को काम हँसाउनुमात्र कदापि होइन। स्पष्ट सन्देश भएन भने हास्यव्यंग्यसम्बन्धी कुनै पनि...	विदेशिने र ठगिइने अनन्त क्रमचालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कामको खोजीमा १ लाख २९ हजार कामदार विदेशिएका छन्। गत आव सोही अवधिमा ९७ हजार १ सय ८० कामदार विदेशिएका थिए। यो ३३ प्रतिशतले...	कहिलेसम्म उदास भइरहने जनताविक्रम संवत्को नयाँ वर्ष सुरु हुन केही दिनमात्र बाँकी छ। नेपाली जनताले नयाँ वर्षलाई नयाँ संकल्प र नयाँ योजना बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको धेरै भइसक्यो। देश संक्रमणकालीन राजनीतिमा...	सार्कः आपसी अविश्वासको साझा मञ्चनेपालमा सन् २००२ को जनवरी २–४ मा आयोजना गरिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को एघारौँ शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति परभेज मुसर्रफको प्रतीक्षा काठमाडौँमा जम्मा भएका...	मलेसियामा नेपाली ठुम्कानेपालका डान्सबारमा नाच्ने युवतीलाई महिनामा २० हजार रुपैयाँ कमाउन धौधौ हुन्छ। यस्तोमा मलेसियामा तीन महिना नाचेर तीनचार लाख रुपैयाँ कमाइन्छ भने उनीहरू त्यता जान लालायित हुने नै भए। पर्यटक र...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...